राम्रो वाई-फाईका लागि कस्तो राउटर किन्ने ? « Sindhuli darpan
राम्रो वाई-फाईका लागि कस्तो राउटर किन्ने ?
१२ माघ २०७८, बुधबार ११:५७
आजको दिनमा घर, अफिस लगायत अन्य क्षेत्रमा वाई-फाई अनिवार्य नै भइसकेको छ । सहज इन्टरनेटको उपलब्धताको लागि पनि वाई-फाईको प्रयोग अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।
वाई-फाई राम्रोसँग चल्न तपाईंले प्रयोग गर्ने राउटरको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसर्थ राउटर किन्ने बेलामा धेरै कुराहरू ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यो नयाँ स्ट्यान्डर्ड भएको राउटरले गिगाबाइटसम्मको इन्टरनेट स्पिडलाई सपोर्ट गर्छ, जबकि पहिलेको स्ट्यान्डर्डमा ६०० एमबीपीएस सम्मको इन्टरनेटलाई मात्र सपोर्ट गर्छ ।
यद्यपि राउटर मात्र राम्रो भएर भने पुग्दैन तपाईंको डिभाइसले पनि हाई-स्ट्यान्डरलाई सपोर्ट गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।
यद्यपि यो सम्भव भने छैन । धेरै प्रयोगकर्ता हुँदा वा भित्ताहरूले वाई-फाईको सिग्नल ब्लक गर्दा वा अन्य केही बाधाहरूका कारण पनि इन्टरनेटको स्पिड कम भइरहेको हुन्छ । यसो भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । किनभने आजभोलिको प्राय राउटरमा हाई इन्टरनेट स्पिड सपोर्ट हुने गर्छ ।
प्रायजसाे राउटरहरूले ब्रोन्डब्याण्ड र इथरनेट दुवै सपोर्ट गर्छ । तर राउटर खरिद गर्ने बेलामा यस विषयमा ढुक्क हुनु आवश्यक छ ।
त्यसैले राउटर खरिद गर्दा ब्रोडब्यान्ड, इथरनेट अथवा यूएसबीलाई सपोर्ट गर्ने राउटर खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
५. वाई-फाई ब्याण्ड
वायरलेस डिभाइसहरूका लागि एन्टेना एकदमै महत्त्वपुर्ण हुन्छ, विशेषगरी वाई-फाई राउटरमा । त्यसैले राउटर खरिद गर्दा यसको एन्टेनाको विषयमा बुझेर खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सामन्यतया राउटरको एन्टेना राउटरको टपमा हुन्छ भने केहीमा इन्टर्नल एन्टेना हुन्छ । यद्यपि इन्टरनेटको सिग्नल इन्टर्नलभन्दा राउटरको टपमा भएको एन्टेनाले राम्रो सिग्नल दिन्छ ।
त्यस्तै इन्टरनेटको राम्रो कभरेजको लागि एन्टेना एडजस्ट गर्न मिल्ने राउटर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
केही राउटरहरूमा विम फोर्मिङ भन्ने क्षमता हुन्छ, जसले वाई-फाई सिग्नल बलियो र स्पिड बढाउन मद्दत गर्छ ।
विम फोर्मिङ भनेको स्पासियल फिल्टरिङ हो, जसले सबै डिभाइसलाई एकमुष्टभन्दा पनि बराबर स्पिड सहित प्रति डिभाइस सिग्नल उपलब्ध गराउँछ ।
राम्रो इन्टनेट अनुभवको लागि विम फोर्मिङ सुविधा भएको राउटर खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।